Maamulka G/Banaadir oo soo bandhigay diyaar garowgiisii ugu dambeeyay ee dhanka roobabka mahiigaanka ah “Sawirro” – Radio Muqdisho
Maamulka G/Banaadir oo soo bandhigay diyaar garowgiisii ugu dambeeyay ee dhanka roobabka mahiigaanka ah “Sawirro”
Dowlada hoose Xamar ayaa soo bandhigtay dhamaan gaadiidka kala duwan ee heeganka ugu jira maareenta magaalada iyo u diyaargarowga roobabka mahiigaanka ah la saadaaliyay in uu dhawaan di’i doono kaas oo la sheegay in uu wato dabeela laga cabsi qabo inuu saameen ku yeesho Caasimadda iyo gobolada dalka.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa kormeer uu ugu kuur galayay xaalada Caasimadda ku maray qeyba badan oo kamid ah wadooyinka Muqdisho iyadoo ay kormeer kaasi ku wehlinayeen gaadiidka kala duwan ee loo diyaariyay arimaha lka xariira maareenta musiibooyinka iyo bilicda Caasimadda.
Kormeerkaasi kadib waxa uu duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish booqday xarunta gaadiidka dowlada hoose Xamar booqashadaasi oo ay ku wehlinayeen guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir waxa uuna warbixana quseeya xaaladaha gurmad deg dega ah iyo u diyaar garowga roobabka ka dhageestay agaasimayaasha gaadiidka iyo dabdamiska.
Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaa kamid ahaa masuuliyiinti goobta ka hadlay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) waxa uu ka hadlay sida ay dowlada hoose Xamar diyaar ugu tahay in ay bulshada ugu qidmeyso si hufan.
Soomaaliya oo Shirweynaha isbadalka cimilada horgeyneysa warbixino ku aadan xaalada cimilada dalka
Caruur ku geeriyootay deegaanka Aato ee gobolka Bakool